Ciidamo uu hoggaaminayo General Indhocadde oo la wareegay Taalada Daljirka Dahsoon -
Home News Ciidamo uu hoggaaminayo General Indhocadde oo la wareegay Taalada Daljirka Dahsoon
Ciidamo uu hoggaaminayo General Indhocadde oo la wareegay Taalada Daljirka Dahsoon
General Yuusuf Maxamed Siyaad Indhocadde iyo ciidamo uu horkacayo ayaa gaaray taalada Daljirka Dahsoon oo lagu wado in berri lagu qabto banaanbax loogaga soo horjeedo Madaxweynaha xilligiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Ciidamada uu horkacayo General Indhocade ayaa fariisimo ka sameystey wadooyinka soo gala taalada daljirka dahsoon waxana uu sheegay in ay amni tahay dadkuna ay banaanbaxa ka soo qeybgalaan.
General Indhocade oo xilal ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray ayaa sheegay in dalku uusan hadda lahayn dowlad maadaama waqtigii baarlamaanka iyo kan madaxweynahaba ee afarta sano ahaa ay dhamaadeen.
“Dalku dowlad malahan baarlamaanka waqtigiisu wuu dhamaaday,madaxweynuhu waqtigiisu wuu dhamaaday,si loo helo in dowlad ummadu leedahay doorasho ku timaado oo xor oo xalaal ah si loo helo maadaama aan dalkan dhiig badan u daadiyay,in afarta sano doorashada la helo,cida diidana aan ka hortagno ayaan halkan u imid.”ayuu yiri General Indhocadde.
“Anigu wasiir baan ahaan jirey wasiirka joogo waa sidaas oo kale,Cabdiqaasim oo Qaahira jooga iyo Farmaajo waa isku mid,farmaajo waxa uu ku joogaa si qalad ah,sharciga ka baxsan,gardarro ah,wixii lagu joogay ka baxsan iyadaana diidanahay.”ayuu sii raaciyay General Indhocadde.
Magaalada Muqdisho ayaa lagu arkayaa caawa ciidamo faro badan iyadoo musharaxiintuna ay sheegeen in berri la qabanayo banaanbaxa waxana ay qaar ka mid ah musharaxiinta ay kormeereen gelinkii dambe ee maanta taalada daljirka dahsoon oo lagu wado in banaanbaxu uu ka dhaco.
Previous articleLebanese court removes judges from Beirut’s explosion probe, activists mock “justice”
Next articleAlgeria sentences jihadist to death for French wandering murder